[झटारो] मदिरामा प्रतिबन्ध नलगाइयोस् ! - व्यंग्य - प्रकाशितः जेष्ठ १७, २०७५ - नेपाल
हामी नेपाली जातिले परापूर्वकालदेखि खाइपिई आएको हाम्रो पवित्र सोमरसमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्ने र बिस्तारै प्रतिबन्ध लगाउने हल्ला बजारमा आइरहेको छ । यस समाचारबाट हामी मदिराका समस्त स्टेक होल्डरहरू चिन्तित एवं आक्रोशित भएका छौँ । दुई–चार जना महिलाले आफ्ना लोग्नेलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेर उजुरी गरेकै आधारमा लहैलहैमा लागेर गृहमन्त्रीले यस्तो राष्ट्रघाती कदम उठाएमा अन्तत: उनकै लागि यो कदम घातक हुन सक्नेछ ।
मदिरा हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न पेय हो, जीवनदायिनी रस हो । यसले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई सदा जीवन्त राखेको छ । यसले लाखौँको रोजगारी सिर्जना गरेको छ, करोडौँलाई आनन्द दिएको छ । रक्सी उत्पादक, वितरक, बिक्रेताको रातारात जीवनस्तर उठाउन यसले योगदान गरेको छ । कुलत हटाउन खुलेका कैयौँ संस्था र क्लिनिक यसले सञ्चालन गरेको छ । अस्पतालहरू चलाएको छ । कतिपय जातजातिको धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा धान्ने पवित्र जल बनेको छ । मुखाले स्वास्नी वा लुरे लोग्नेलाई बसमा राख्न यसले मद्दत गरेको छ । दुष्ट हाकिमहरू, सामन्त र साहुहरूसँग मुखमुखै लाग्न, नेतालाई गाली गर्न यही रसले शक्ति प्रदान गरेको छ । मनका कुण्ठा र रिस पोखेर मानव मात्रमा शान्ति तथा आध्यात्मिकताको विकास गर्न यसैले सघाएको छ । अनेक रोग र दुर्घटना निम्त्याएर सरकारलाई जनसंख्या नियन्त्रणमा पनि साथ दिएको छ । मापसे जाँच, भट्टी अनुगमन, दुर्घटना उद्धार इत्यादि काममा सक्रिय राखेर सुरक्षाकर्मीलाई शरीरमा बोसो लाग्नबाट जोगाएको छ । मुलुकभरि हरेक साँझ लाखौँको जनशक्तिलाई भट्टीमा अलमल्याएर सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन सक्ने खतराबाट बचाएको छ । अन्न– फलफूलको कुन ठूलो कुरा भयो र ? थोत्रा मोजा तथा कुहिएका छालाबाट समेत सोमरस उत्पादन गर्न सक्ने नेपालीको भीषण प्रतिभाको प्रस्फुटन यसैले गराएको छ ।
सरकारले विचार गरोस्, रक्सीमा लगाइने प्रतिबन्धले उत्पन्न हुने सामाजिक असर निकै भयावह हुनेछ । झैँझगडा, होहल्ला, हानाहान, ठोकाठोक, हत्या, बलात्कारका घटना घटेर हाम्रो समाज निष्प्राण हुनेछ । मानिसमा आँट सिद्धिने छ, जोस हराउनेछ । बैठक, सेमिनार, बिहे, ब्रतवन्ध, पास्नी, तिजलगायत हाम्रा चाडपर्व निरस हुनेछन्, कतिपय लोप नै हुनेछन् । भोजभतेर खाइनसक्नुका खल्ला हुनेछन् । अस्पताल तथा क्लिनिक उद्योगमा ह्रास आउनेछ ।
समाचार अनुसार नगरको वडापिच्छे एउटा र गाउँपालिकामा एउटा मात्र मदिरा बिक्री हुने ठाउँ तोकिनेछ । यो जनतालाई लाइनमा उभ्याएर दु:ख दिने र व्यापारीलाई सिन्डिकेट दिने षडयन्त्रकारी नीति हो । सबैखाले सिन्डिकेट समाप्त पार्छु भन्ने गृहमन्त्रीले यसरी सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्दा मन्त्रीको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न हुनेछ ।
नयाँ नियममा मदिरा किन्नेले तीनपुस्ते लेखाउने प्रणाली लागू गर्न खोजिएको पनि सुनिएको छ । सरकारको काम जनताको अपमान गर्ने होइन । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भारतले लागू गरेकै नियम ल्याएर यस्तो राष्ट्रवादी सरकारले लम्पसारवादी भएको पटक्कै सुहाउँदैन । अत: मदिरामाथि नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रघाती कानुन बनाउने सोच तुरुन्त त्याग्न हामी गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ । अन्यथा त्यस्ता कानुनविरुद्ध हामी मदिरा उत्पादक, बिक्रेता, थोक तथा खुद्रा सेवनकर्तालगायत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सम्बन्धित सबै स्टेक होल्डर मिलेर महासंघ गठन गरी संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिन चाहन्छौँ । आगे गृहमन्त्रीजीको जो विचार !
प्रकाशित: जेष्ठ १७, २०७५